मलेसियामा प्रहरीबाटै लुटिए नेपाली ! — Hamro Sanchar
मलेसियामा प्रहरीबाटै लुटिए नेपाली !
काठमाडौँ- गोरखाका रितेश गुरुङ कार्यस्थलबाट क्याम्पभित्र छिर्दा बेडहरू ठीक ठाउँमा थिएनन् । सबैका दराज फोरिएका थिए । ‘मेरो पर्समा ३ हजार रिंगेट थियो । मोबाइल थियो,’ उनले सुनाए, ‘नेपाली १० रुपैयाँ मात्रै छाडिदिएछन् । बाँकी सबै लगेछन् ।’
गुरुङले मध्यरातमा काम गरिरहेका ठाउँमा खबर पाएका थिए, ‘प्रहरीको एक टोली क्याम्पभित्र छिरेको छ । उनीहरूबाट खोजतलास भइरहेको छ । कसैको सामान पनि बाँकी छैन । लुटेर लगे ।’ त्यतिबेला सबै कामदार ड्युटीमा थिए । ‘बिहान ५ बजे क्याम्पमा आउँदा फुटाउन बाँकी दराज थिएन,’ उनले भने, ‘प्रहरीबाट यस्तो काम भएको देख्दा रुन मन लाग्यो ।’ एउटै कोठाभित्र झन्डै ५० जना बस्थे । सबैको अलग–अलग बेड थियो । बेडपिच्छै दराज थियो । उनीहरू मलेसियाको केलाङस्थित सेलेङगारमा बस्छन् । एमएफई आल्मुनियम फ्रेमवर्क कम्पनीमा काम गर्छन् ।
‘हाम्रो क्याम्पभित्र गैरकानुनी कामदार खोज्दै प्रहरी छिरेका हुन् । उनीहरूले राहदानी भएका कामदारलाई पिटेर घाइतेसमेत बनाए,’ अर्का पीडित रेशम चौधरीले भने, ‘गैरकानुनी कामदार नभेटेपछि हाम्रा साथीको पैसा लुटेर गए ।’
लुटपाट गर्ने प्रहरीविरुद्ध उजुरी नगरेको पीडितहरूको भनाइ छ । कम्पनीले क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने पीडितको माग छ । क्वालालम्पुरस्थित नेपाली दूतावासले नेपाली कामदारको क्याम्प लुटिएको विषय जानकारीमा आइनसकेको जनाएको छ । ‘यस विषयमा कुनै नेपालीले पनि लिखित उजुरी दिएको छैन,’ दूतावासका श्रम काउन्सिलर बद्री कार्कीले भने । कान्तिपुरमा खबर छ ।’